Dhimma Hiriira PPii Waamaa Jirtu !Abiyyi Ahmad kanaan dura Oromoo tuffatee, dhaga’uu didee Jumlaan hidhee, Jumlaan ajjeesaa jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhimma Hiriira PPii Waamaa Jirtu !Abiyyi Ahmad kanaan dura Oromoo tuffatee, dhaga’uu didee Jumlaan hidhee, Jumlaan ajjeesaa jira.
Dhimma Hiriira PPii Waamaa Jirtu !Abiyyi Ahmad kanaan dura Oromoo tuffatee, dhaga’uu didee Jumlaan hidhee, Jumlaan ajjeesaa jira.
~ Abiyyi Ahmad kanaan dura Oromoo tuffatee, dhaga’uu didee Jumlaan hidhee, Jumlaan ajjeesaa jira.
Yeroo ammaa immoo gita bittoota ilmaan Miniliki inni jala fiigaa ture amma isatti galagalanii arraba waan itti baasaniif, Oromoo hiriira deggersaa jedhee dhamaasaa jira.
~ Hiriira deggersaa Abiyyi jedhu kun Caasaa isaa warra ilmaan Minilik tarkaanfachiisuuf dhama’aantu irratti hirmaachaa jira. Kan hiriira kana adda durummaan qopheessaa jiru warra Ilma Oromoo ajjeesanii dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turantu qopheessaa jira.
~ Kan Oromoo taatanii falmaatti jirtan, kan dhiigi ilmaan Oromoo dhangala’e irra hin tarkaanfadhu jedhu akka hin hirmaanne. Bakka akkasii hin dhaqinaa, nama hiriira akkasiitti waamicha isiniif godhu eeruu nuuf kennaa. Bakka hiriirri akkasii jiru dhaqxee miidhamni sirra yoo ga’e Leellistoota ilmaan Oromoo tarkaanfachiisuuf dhaqxee tarkaanfiin sirratti fudhatame jedhamtee saaxilamta. Dubbiin dhumaa walitti himnu kanuma.
~ Hojjettootni Mootummaa anaan na dirqisiisan waanti jedhamu gama kamiinuu fudhatama hin qabu. Yoo dhuguma nama barate taate Mirga kee kabachiifadhu, kan kanaan achii ati biyyaaf mitii ofiikeefuu hin taatu. Kanaaf atiis yoo diddee dhaqxe PPii warra ilmaan Miniliki tarkaanfachisaniidha.
#Dubbiin dhugaas, Haqni Ummata keenyaaf dhaamnuus kanuma.
Nan deggeriin, hin qabsa’iin, hin loliniis, aarsaas hin kaffalin. Kun hunduu Mirga keeti. Garuu hiriira Immo Falmattoota Haqaa irratti hin ba’iin, Nama Ilma Oromoo duguge nurratti hin faarsiin, faarsaas Ummata keenya Waliin jiraachuu hin dandeessu.
Godina arsii anaa shirkatii gochii gara jabummadhan humnii addaa Polisin nannoo orimiyaa qerroo
The U.S. Should Sanction Somalia’s President for Human Trafficking